အကောင်းဆုံး တရုတ်ထောက်ပံ့ရေး Tranexamic Acid အလှကုန်အဆင့် 99% CAS 1197-18-8 ထုတ်လုပ်သူနှင့် စက်ရုံ |Yeme
တရုတ်နိုင်ငံတွင် Tranexamic Acid အလှကုန်အဆင့် 99% CAS 1197-18-8 အစုလိုက် ထောက်ပံ့သည်
INCI အမည်- Tranexamic Acid
အရည်အသွေးစံနှုန်း- CP2010/BP/EP/ JP/USP
အသွင်အပြင်- အဖြူရောင်ပုံဆောင်ခဲမှုန့်၊ အရသာမရှိသလောက်ပါပဲ။
ပျော်ဝင်နိုင်မှု- ရေတွင် အလွယ်တကူ ပျော်ဝင်နိုင်သည်။
Tranexamic acid၊ မော်လီကျူးဖော်မြူလာမှာ C8H15NO2၊ ဓာတုအမည်မှာ trans-4-aminomethylcyclohexanecarboxylic acid၊ အဖြူရောင်ပုံဆောင်ခဲမှုန့်၊ အနံ့မရှိ၊ အနံ့၊ ၎င်းသည် ရေတွင် အလွယ်တကူ ပျော်ဝင်နိုင်ပြီး အီသနော၊ အက်စတိုး၊ ကလိုရိုဖောင် သို့မဟုတ် အီသာတွင် မပျော်ဝင်လုနီးပါးဖြစ်သည်။
Tranexamic acid သည် မီလန်နင်ကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အရောင်ခြယ်မှုကို လျော့ပါးစေသည့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ဖြူစင်စေသည့် အမျိုးအစားအသစ်ဖြစ်သည်။
Tranexamic acid ၏ဖြူစင်စေသည့်ယန္တရားသည် tyrosinase နှင့် melanocytes များ၏လုပ်ဆောင်မှုကို တပြိုင်နက်နှင့် လျင်မြန်စွာ ဟန့်တားရန်နှင့် melanin များစုပုံလာခြင်းကို တားဆီးရန်နှင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကြောင့် melanin ယိုယွင်းမှုဖြစ်စဉ်ကို ပိတ်ဆို့ရန်ဖြစ်သည်။
Tranexamic acid သည် peptide bond hydrolysis တွင် proteases ၏ catalysis ကို ဟန့်တားပေးသော protease inhibitor ဖြစ်ပြီး ရောင်ရမ်းသော proteases ကဲ့သို့သော အင်ဇိုင်းများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဟန့်တားကာ အနက်ရောင်အစက်အပြောက်များတွင် epidermal cell လုပ်ဆောင်မှု မူမမှန်ခြင်းကို ရပ်တန့်ကာ melanin မြှင့်တင်နိုင်သော factor group ကို ထိန်းထားနိုင်ရန်၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဓာတ်ရောင်ခြည်ဖြင့် မီလန်နင် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဖြစ်စဉ်ကို လုံးဝဖြတ်တောက်ပစ်လိုက်သည်။အမည်းစက်များ ထူလာကာ ကျယ်လာပြီး တိုးပွားလာခြင်းမရှိတော့ဘဲ အရေပြားအရောင်ခြယ်မှုကို ထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ်နိုင်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်လာမည်ဖြစ်သည်။
1. melanin ထုတ်လုပ်မှုကိုပိတ်ဆို့;
2. melanocytes များ melanocytes မှ melanocytes မှ အနီးနားရှိ ဆဲလ်များသို့ လွှဲပြောင်းခြင်းကို ပိတ်ဆို့ခြင်း၊
3. stratum corneum သွန်းခြင်းကိုမြှင့်တင်ပြီး melanin ၏ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုအရှိန်မြှင့်သည်။
Tranexamic acid ၏အားသာချက်
1. ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်ခြင်း၊ ရေတွင်အလွယ်တကူပျော်ဝင်နိုင်ခြင်း၊ အရောင်မရှိသော၊ အနံ့မရှိ၊ အလွယ်တကူအရောင်မပြောင်းပါ။
2. အခြားအဖြူရောင်ပစ္စည်းများဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ပြီး တည်ငြိမ်မှုကောင်းမွန်သည်။
3.High thermal stability နှင့် မဆိုးရွားပါ။
4. ယားယံမှုနည်း၍ မျက်နှာဖုံးများအတွက် ယားယံခြင်းမရှိပါ။
5.Fast effect ၊ အသားအရည်ကို 1-2 ပတ်အတွင်း ဖြူစင်တောက်ပစေပြီး လျင်မြန်သော အာနိသင်ရှိသော ထုတ်ကုန်များ။
ပေါင်းထည့်သည့်ပမာဏ- 3% (အကြံပြုထားသည့် ph မှာ 3~9 ဖြစ်သည်။)
အသားဖြူစေသော ထုတ်ကုန်များ (ခရင်မ်၊ အနှစ်သာရ၊ Mask စသည်တို့)
အမဲစက် ထုတ်ကုန်များ (အမဲစက်၊ တင်းတိပ်ခရင်မ်)၊
ယခင်- Tranexamic Acid အလှကုန်အဆင့် 99% CAS 1197-18-8 တရုတ်တွင် Tranexamic Acid ပေးသွင်းသူ
နောက်တစ်ခု: အသားအရေကိုဖြူဝင်းစေသော သဘာဝ Alpha Arbutin တင်သွင်းသူသည် တရုတ်နိုင်ငံတွင်ဖြစ်သည်။
99% Tranexamic Acid အလှကုန်အဆင့်
CAS နံပါတ် 1197-18-8
သန့်စင်သော Tranexamic Acid အလှကုန်အဆင့်
Tranexamic Acid အလှကုန်အဆင့်
Tranexamic Acid Powder ၊
Tranexamic Acid တင်သွင်းသူ
အရည်အသွေးမြင့် L (+) -Ascorbic Acid CAS 50-81-7 V...
သန့်စင်မှုမြင့်မားသော အလှကုန်ပစ္စည်းများ 3-O-Ethyl-L-Asco...